July Dream: Come to home
ရေးပေးတဲ့ အတွက် သိုင်းခရု သိုင်းလိပ် သိုင်းပုရွက်ဆိပ်။ နင်တံဆိပ်ခေါင်း ရူးမှန်း ငါသိသားပဲ။ ဘာတဲ့ ချစ်စရာတိုင်းပြည်ထဲမှာနေနိုင်တဲ့ သူ အတော်ရှားပဲ...စကားလုံးလေးကတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ...။ ကုလားမလေးတွေ ချောလားဟ။ ဒါလဲ နင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ :) :)။ နင်က ကုလားပြည်အကြောင်းတော့ရေးတယ်။ စလုံးက အပြန် အကြောင်းတော့ရေဘူး..စလုံးအကြောင်းရေးရင် အသီးကွဲတာတွေ ပါမှာဆိုးလို့လား၊၊၊၊
31 May 09, 01:30
kom: တို့တံဆိပ်ခေါင်ေးတွက တော့ရန်ကုန်မှာကျန်ခဲကတာ ပျေက်ပျက်ကုန်ပြီ။ ကိုမဆာလာ သဘော်လိုက်တိုင်း ရောက်လေရာအရပ်ကနေ ပို့စကဒ်ထည့်ခိုင်းပြီးစုထားတာ။ ကီးချိန်းလည်းစုတယ်။
31 May 09, 01:29
31 May 09, 01:28
kom: ကုလားဝတ်စုံလေးနဲ့ အတော်ကြည့်လိုကကောင်းမယ်
31 May 09, 01:27
kom: အဲဒီကတည်းက အိပ်ရာခမ်းနားစုနေတာကိုး။
kom: မြတ်စွာဘုရား စာအုပ်က လူ့တရပ်။
31 May 09, 01:26
kom: တို့လည်း တိုရှည်ကြိုက်တယ်။ ချာပတီလေည်းကြိုက်တယ်
31 May 09, 01:25
kom: စာစီစာကုန်ေးတွေမှာဆုရနဲ့မဲ့ပုံဘဲ။
kom: အစကလေးကိုကဖတ်လို့ကောင်းတယ် ကိုယ့်မောင်ရေးတာမို့လို့ပြောတာမဟုတ်။
ရှားပါး ရှေးဟောင်း တံဆိပ်ခေါင်းတွေကို
သွားတယ်(စာအိတ်နဲ့နော် ဂုံနီအိတ်ထင်နေမှာစိုးလို့ )
ဒါနဲ့ အဲဒီကျွန်းကနေရော မပြန်ဖြစ်သေးဘူးလား
အဲဒီသွားတုန်းက ဗိသုကာ စာအုပ်တွေလည်း ဝယ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။
ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးဦးလေ။ ကုလားပြည်ဆင်းရဲတယ်ဘယ်သူပြောလည်း ဗိသုကာအဆောက်အအုံတွေကတော့ အမိုက်ပဲလို့ပြလို့ ရတာပေါ့။
မယ်ကိုးလည်း အမောင်ဂျူလိုင် ဓာတ်ပုံတွေ ပြမှ မြင်ဖူးတာလေ။
နှစ်ကျောင်းတူ သူငယ်ချင်း ဆိုတာ ဘာပါလိမ့်။ မြန်မာပြည်မှာရော စင်ကာပူမှာရော ကျောင်းတူတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းလား။ ပုလုကွေးထက် ကို July ကို Sr ကျတယ် ထင်နေတာ။
ပုလုကွေးနဲ့က ၂ ကျောင်းတူ
အဲဒီလိုပဲ မိုးခါးနဲ့က ဘုန်းကြီးကျောင်းတူတယ်။
း)))ပုလုကွေးနဲ့ ကျောင်းတစ်နှစ်တည်းလား.. ဒါဆို
ညီမလေး ငယ်ငယ်နဲ့လည်းတူမှာပေါ့နော်.း)
ကိုဂျူလိုင်ကလဲ ကိုရွာသားလို အန်ချင်စရာကြီးပေါ့...
IT စာမေးပွဲတွေကို ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်ခဲ့တဲ့သူမို့ လေးစားပါတယ်...
ဒါပေမယ့် "ကုလားပြည်" ဆိုပြီး သုံးနှုံးထားတာက ဖတ်ရတာ ထောက်နေသလားပဲ...
(အန်ချင်စရာ = အင်ဂျင်နီယာ)
ဒီပို့စ်လေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးထားပေမယ့် ဗဟုသုတရော..။ စဉ်းစားစရာလေးတွေရော..။ တော်တော်ရလိုက်တယ် အစ်ကိုရေ...။
ဖတ်မိတာလေးတွေထဲက တချို့ အရာတွေ စိတ်မကောင်းဘူး။
သေချာတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် အပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ မြင်တဲ့ အမြင်တွေ၊ အတွေးတွေက ပိုကျယ်ပြန့်လာတယ် ပိုမြင်တတ်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အခြေအနေကြောင့် မမြင်တတ်တာတွေ၊ မမြင်နိုင်တာတွေကိုလဲ နားလည်ပေးနိုင်ဖို့လဲ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။
လေးစားရတဲ့ အစ်မတစ်ဦးက ပြောတဲ့ စကားလေးပါ။
" ဦးနှောက်ကို လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်မပေးနိုင်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှု နောက်ကို လိုက်တတ်ကြတယ်" တဲ့။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်မှာလဲ မမြင်နိုင်သေးတာတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။
တောင်းပန်ချင်တာ တစ်ခုက အချင်းချင်း အပြစ်တင် နေကြမယ့်အစား နားလည်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
ပြီးတော့ ကိုယ်က ပိုမြင်နိုင်ပြီဆိုရင် ကိုယ် မြင်တာလေးတွေကို သူများတွေပါ မြင်တတ်အောင် မျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ပေးကြပါ။
ကိုယ်တတ်ထား သိထားတာလေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ မျှဝေပေးကြပါ။
စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အနာဂတ်ပျောက်သလို ခံစားရတဲ့အခါ စာရိတ္တတွေကို ထိန်းသိမ်းထားရတာ အလွန်ကို ခက်ခဲပါတယ်။
အဲဒီသူတွေအတွက် " role model" တွေ လိုပါတယ်။
Everybody can bearole model လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အခြေအနေကြောင့် ဆိုးနေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ငွေရောင် အနားသတ်လေးတွေ ရှိနေဆဲလို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ လူမျိုးတွေ အားလုံးကို ကျွန်မ ချစ်ခင်ယုံကြည်နေဆဲပါ။
ဘယ်ပို့စ်ကို ဘယ်လို ခံစားသုံးသပ်သွားသလဲတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုက ဒီကွန့်မန့်မှာ အစ်မပြောသွားတဲ့ အရာတွေဟာ အခုပို့စ်နဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ရှေ့ကပို့စ်တွေကိုပဲ ရည်ညွှန်းသလားပေါ့။
အစ်မပြောတာတွေကို ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ နိုင်သလောက်လေး လုပ်နေကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ရွက်ပုန်းသီးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့်... ???
အဲဒီလိုပဲ စင်ပေါ်တက်မယ့် လူစားတွေ မဟုတ်တဲ့ Everyday Heroes တွေလည်း အများသားပဲ။ တိုက်ပုံကြီး တကားကား ၀တ်ပြီး အလံဝင်ထူတဲ့ ကောင်တွေကို ကျွန်တော် မုန်းတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
မင်းလည်း လုပ် ငါလည်း လုပ်... တန်းတူ လုပ်... အချိန်တန်လို့ တိုက်ပုံဝတ် လာတဲ့အခါ လက်ခုပ်တီးပေးပါမယ်။ အခုဟာက... မင်းတို့လုပ် ငါတို့ စင်ပေါ်တက်မယ် ဆိုတဲ့ အချိုးတွေလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။
တိမ်တွေမှာ ငွေရောင် အနားသတ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် ၂၀၀၈ ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့မှာ ရေးဖူးပါတယ်။ အချိန်ရရင် သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ သေချာတာက အစ်မ ပြောချင်တဲ့ ငွေရောင် အနားကွပ်နဲ့တော့ မတူပါဘူးလေ။
အစ်မရဲ့ ငွေရောင် အနားကွပ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော် ယုံကြည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားနေတာပေါ့။ =)
ဟာ.. ပါတ်စ်စပို့တွေ ခုခေတ်မှာလွယ်တယ် ဟုတ်ရား... ဘယ်နှစ်ပုံးကုန်မှလွယ်တာလဲ ဟင်
မသိလို့ပါနော်...။ကိုဂျုတို့လို သတင်းတပ်ဖွဲ့မှူး လက်မှတ်ကြီးနဲ့ ရုံးစာကြီး ဆိုရင်တော့ အလကားတောင်ရမှာသေချာတယ်ဗျ။ Microsoft Certified Professional ဒါကို အောင်မြင်အောင် ဖြေဆိုလာတာကိုတော့ လေးစားတယ်ဗျာ။ ဦးနှောက်ယိုစီးတာလဲ မပြောနဲ့လေဗျာ ရတဲ့လခ၊ နေရထိုင်ရတာ၊ လွတ်လပ်မှု၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့ အကုန်လုံးက မကောင်းတော့ ဦးနှောက် ယိုစီးတာတောင် နဲသေးတယ်။ အမှန်က ရွာမှာရှီသမျှလူတွေ အကုန် နိုင်ငံခြားထွက်ချင်နေကြတာ အခြေအနေနဲ့ ပိုက်ဆံမရှိလို့သာ ကြိတ်မှိတ်လုပ်နေရတာဗျ ဒါက ကျနော်သိသလောက်ပေါ့ဗျာ.... ဆရာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်.. ဟီး
ဖုန်တွေ ဗွက်တွေ အကြောင်းရော ထည့်မရေးထားဘူးလား။ :D
ကိုပုလုကွေးပြောတာ ဟုတ်လားဟင် .. :D
တနေ့နေ့ တချိန်ချိန် မျှော်လင့်သလိုလေးများ ယောင်ယမ်းဖြစ်လာလေမလား မရဲတရဲ မျှော်လင့်မိပါတယ် ..
ဟိမဝန္တာဖက် သွားတုန်းက ပုံတွေတင်ပေးရင် ကောင်းမယ်။
ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာသဘောကျလို့ ပြုံးရယ်သွားပါတယ် ဓါတ်ပုံတွေလဲမြင်ချင်သေးတယ်း)
ပိုစ့်ကိုရော ကော့မန်.တွေရော ဖတ်သွားပါတယ်
အရေးအသားနဲ. အကြောင်းအရာတစ်ခု ကို ပါအောင် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်
( စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းကြီးမို.ထင်ပ P:)
ကျွန်တော်တွေးမိတယ် နောက်ဆိုရင် ရွှေပြည်မှာ ကျန်ခဲ့သူတွေက ရှေ.ကနေ ဘွဲထူးအနေနဲ့ တပ်ရမယ်ထင်ပ ဥပမာ မြန်မာပြည်-ညိုညိုလှ တို.ဘာတို.ပေါ့ P:
ကော့မန်.လေးတွေ ကောင်းတယ်ဗျ ထူးထူးခြားခြား Tune ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ရေးတာ သူလည်းတော်တော် ခံစားသွားရတယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ..
ကြုံလို.တစ်ခုပြောပြအုံးမယ် အရင် ၁လခွဲလောက် ကပေါ့ သူငယ်ချင်း ဘလော့ဂါ တစ်ယောက် (ကျောင်းကပါပဲ ) ရေးတဲ့ပိုစ့်လေး မြန်မာပြည်မှာ လာဘ်စားတဲ့ အကြောင်း ရေးထားတာ ကျွန်တော့်ကို မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းကလှမ်း ပြော တယ် ၊ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီး အဲဒီပိုစ့် ကို ရေးရင် ပိုလေးစားမိပါမယ်တဲ့ သူကဆိုတယ် ......
ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဒီကသူငယ်ချင်းလည်း အမှန်ကို ရေးတာပါ ........
အဲဒီကတည်းက စဉ်းစားမိတယ် စာရေးတဲ့အခါမှာပေါ့ မှန်တယ်ဆိုပေမယ့် ၊ ဟိုမှာ အခြေနေအမျိုးမျိုးကြောင့်
ကျန်နေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို.သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်
ခံစားရစေမယ့် စာမျိုး မရေးမိအောင်.... ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီကကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးက ကျွန်တော် ရှာတဲ့ငွေ မစင်ကြယ်ဘူးဆိုတဲ့အခါ ပြန်ပြောစရာ စကားမရှိသလို ရင်နင့်အောင်ခံစားဖူးပါတယ် .....
"မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါသည်" ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးရယ်
"မြန်မာပြည်မှာနေစေချင်ပါသည် " ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေး ရယ် အားရင် လာပြီးဖတ်စေချင်ပါတယ် တစ်ခုခုတော့ ခံစားလို.ရမယ်လို.ထင်ပါတယ်....
ကိုJuly Dream ကျောင်းရောအလုပ်ရော အဆင်ပြေပါစေဗျာ .....
(ကိုJuly ရေ ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးဘယ်လိုမှ မတွေးစေချင် ဘူးနော် အခုရေးပြီး Publish လုပ်ဖို.ချိန်နေတာ ကြာ သွားတယ် နောက်တော့ထူးပါဘူးဆိုပြီး တင်လိုက် ပါတယ် ဗျာ )
Blog မှာ ရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေက ထိခိုက်ပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မပါပဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ရေးလိုက်တာပါ။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝှါကို တိုက်ရိုက်ကြီး ထိခိုက်ပါစေ ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။
နေ့စဉ်ဘ၀မှာ မြင်နေ ကြားနေ တွေ့နေရတာကို အခြေခံပြီး ခံစားချက်တွေကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ စကားလုံးတွေကို အခိုက်အတန့်လေး တည်မြဲနေမယ့် နေရာတစ်ခုမှ မှတ်တမ်းယူထားတာပါ။
အမြင်တွေ ရှူထောင့်တွေကတော့ ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ ဘ၀တွေ မတူမှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကောက်ချက်ချတာတွေလည်း ကွဲပြားသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြင်တွေ မတူတိုင်း ရန်သူ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် အထွေအထူး မခံစားမိအောင် နေကြည့်နေပါတယ်။ =)
ဘလိပ်ဒါးရဲ့ camera ကို သတိရစေပါသည်။